Olee otú mmekọrịta Playlist ka iPhone
> Resource> iPhone> Olee ka mmekọrịta Playlist ka iPhone enweghị iTunes
"Ọ dị onye maara ihe n'ụzọ dị mfe ka mmekọrịta playlist ka iPhone? M mkpa nyefee playlist ka iPhone na-ege ntị na-aga. M maara iTunes bụ ike ime ya. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, m iTunes dị nnọọ ịkwụsị ọrụ. Ugbu a ọ bụ isi na-awa maka m ka m na-listi ọkpụkpọ na m iPhone. bụla aro ga-ekele. N'ihi! "
Playlist bụghị syncing ka iPhone nwere ike ịbụ isi na-awa maka iPhone ndị ọrụ amasị iji iPhone dị ka ihe iPod na-ege ntị music. N'ezie, iPhone na-arụ ọrụ a yiri nnọọ ụzọ iPod. Otú ọ dị, mgbe sọfụ internet, i nwere ike mgbe niile na-ahụ na ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere 'Olee otú mbubata playlist ka iPhone' na discussions.apple.com. Mgbe ụfọdụ, n'ihi iTunes egwuregwu ma ọ bụ iTunes onwe ya, listi ọkpụkpọ dị nnọọ ike ga-agafere iPhone. N'ezie, e wezụga iTunes, ị nwere ike ịdabere na ihe iTunes ọzọ ka mmekọrịta playlist ka iPhone. Na-esonụ, Aga m agwa gị otú ị mmekọrịta playlist ka iPhone site na kọmputa gị na iTunes.
Download Wondershare TunesGo ikpe mbipute inwe a na-agbalị!
Wondershare TunesGo bụ desktọọpụ iPhone ngwá ọrụ na anyị na-eji nyefee playlist ka iPhone. Mgbe ị na-ike gwụrụ nke iTunes ma ọ bụ nanị na-ahụ na iTunes nwere ike ime ihe ndị ị na-atụ anya ya na-eme, ị ga-agbalị TunesGo. Ọ bụ ihe kasị mma iTunes enyi idozi ihe iTunes dara mkpụmkpụ. Na ya, i nwere ike nyefee playlist ka iPhone site na kọmputa na iTunes. Lee otú ọ na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 1. Run TunesGo
Jikọọ iPhone na Windows PC na ẹkedori TunesGo. Ọ ga-ahụ gị iPhone ma na-egosi iPhone na isi window na ya niile faịlụ ota n'ime udi. Site n'aka ekpe, ị pụrụ ịhụ ihe aha dị ka Listigwuọ. Pịa ya, niile listi ọkpụkpọ na gị iPhone ga-egosipụta na n'akụkụ aka nri.
Nzọụkwụ 2. Import playlist ka iPhone
Pịa triangle n'okpuru Add n'elu nke isi window. Site ndọpụta ndepụta, ị ga-ahụ 2 nhọrọ: Tinye iTunes Playlist na Tinye listi ọkpụkpọ site na Computer. Ọ bụrụ na ị pịa 'Tinye iTunes Playlist', a ọhụrụ mkparịta ụka igbe ga-apụta na niile iTunes listi ọkpụkpọ. Mgbe ahụ i kwesịrị ego ndị dị mkpa listi ọkpụkpọ na pịa 'OK'. Ọ bụrụ na ị pịa 'Tinye playlist site na kọmputa', mgbe ahụ ị na-kwesŽrŽ agagharị gị na kọmputa na họrọ nchekwa nke na-azọpụta niile songs gị mkpa. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ na nchekwa aha na-aghọ ndị playlist aha, na ihe nile songs na nchekwa agbakwunyere na playlist.
Lee otú mfe ọ bụ mbubata listi ọkpụkpọ site na kọmputa na iTunes gị iPhone. Iji mụtakwuo banyere akwado Apple ngwaọrụ, biko pịa ebe a.
Download TunesGo ikpe mbipute na-agbalị for free ugbu a!
10 égwu Ka ibupute foto na si iPhone